Fandefasana ny volana martsa 2ª any Kolombia - Diabe maneran-tany
Home » About us » Gazety ho an'ny gazety » Fanontana ny volana martsa 2ª ao Kolombia navoaka
Fanontana ny volana martsa 2ª ao Kolombia navoaka
13 / 11 / 2019 14 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Notanterahina tao amin'ny Capitol National an'ny Repoblika Kolombia ny sary fanoharana an'ohatra 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana.
Ireo mpikambana ao amin'ny Ekipa fampiroboroboana ny volana martsa, olona manokana avy amin'ny sehatry ny fanabeazana, akademika ary politika no nanatrika.
Tamin'ny teboka voalohany dia ny fanolorana ny birao, araka ny tenin'i Alfredo Salazar mpanatanteraka ny fandraisana anjaran'ny fampianarana.
Manohy ny fandaharam-potoana dia nanolotra ny heviny momba ny World martsa ny mpanabe, Maryori Chacon.
Amin'ny tranga manaraka dia nadika ny hiram-pirenen'ny firenentsika malala, mitohy miaraka amin'ny fandikana ny mozikan'ilay vondrona Ambares.
Ny fiarahabana olona maha-olombelona antsika momba ny fandriampahalemana, tanjaka ary fifaliana dia nomen'ny mpitondra tenin'ny World March for Peace and Nonviolence Ariel Acosta Ortega.
Tsy ampy ny tenin'ny mpandrindra nasionaly Cecilia Umaña
Ny tenin'ny Coordinator eo amin'ny sehatra nasionaly Cecilia Umaña izay niarahaba dia niarahaba ary nanasa ny mpanatrika handray anjara mavitrika amin'ireo olana nipoitra tamin'ny volana martsa ka tsy ampy.
Isan'ireo mpitsidika dia ny chef Humanistana sy iraisam-pirenena Carlos Navarro izay niresaka ireo olona nanatrika tao anaty fiarahabana fohy nefa somary nirehareha.
Teo koa i Juan Carlos Triana, namana malalany sy kandida ho mpanolotsaina ho an'ny antoko maitso, izay, taorian'ny fiarahabana azy, dia nilaza ny volana martsa.
Lina M. Gualdron dia naneho ny filàna handray anjara mavitrika amin'ny martsa maneran-tany faharoa
Avy eo ny iray tamin'ireo solontena tamin'ny diabe amerikanina voalohany ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanam-pahalalàna Lina M. Gualdron dia naneho ny tokony handraisana anjara mavitrika amin'ny faharoa Martsa izao.
Nanatrika ihany koa ilay mpampianatra amin'ny haino aman-jery plastika, Angel Eduardo B. Esquivel, izay nandinika tsara ny hetsika hiroso amin'ny kolotsaina fandriampahalemana sy tsy herisetra.
Ny fandikana mozika vaovao ny firenentsika dia narahina, mba handre ny teny mampihetsi-po sasany avy amin'i Patricia White de Salazar izay misolo tena ny fanabeazana momba ny fanabeazana.
Nifarana tamin'ny fanaovam-beloma mafana ny lehiben'ny lanonana izay nanasa fivondronana camaraderie iray, izay nahazoany finamanana sy fifanakalozana.
Ity fampahalalana ity dia navoaka tao amin'ny Ny Gazetin'ny Kongresin'ny Colomnia ary azo alaina ao amin'ity rohy ity: Fanontana ao amin'ny Magazine Ny Kongresy Kolombiana navoaka tamin'ny volana septambra 2019
Ny lokon'ny fandriampahalemana ao amin'ny Kolosiana any Roma
Fanehoan-kevitra 1 amin'ny "Famoahana ny 2 martsa any Kolombia no nivoaka"
Pingback: Gazety maneran-tany - laharana 3 - ny volana martsa